China ALIGNER 63 -315mm Kubata Mapaipi Zvakadaro HDPE Welding Machine Plastic Pipe Tools Aligner Manufacture and Factory |CHUANGRONG
1. ALIGNER Chishandiso chehunyanzvi chakakosha kubata pombi dzakadzikama uye dzakarongeka panguva ye electrofusion.
2. Iyo inogadzirisa 63 inogadzirwa inenge yakazara mune yakakosha Aluminium alloy uye inoratidzira mubatanidzwa wepakati wenzvimbo dzakagadzika pa 45 degree uye 90 degree, yekuzvibata-centring clamps isingadi ma adapter.
3. Iko mukana wekubvisa chikamu chimwe cheaxis inotakura zvisungo uye imwe simbi pachayo , inobvumira kushandiswa kwekutepa tee panguva yekusanganiswa.
Factory Mutengo HDPE Welding Machine Plastic Pipe Zvishandiso Aligner
Huremu (Maumbirwo Emaitiro):
ALIGNERChishandiso chehunyanzvi chakakosha kubata mapaipi akamira uye anoenderana panguva ye electrofusion.iyo algner 63 inogadzirwa inenge yakazara mune yakakosha Aluminium alloy uye inoratidzira yepakati joint yezvinzvimbo zvakagadziriswa pa45 degree uye 90 degree, yekuzvisimbisa-centring clamps izvo zvisingadi adapter.Iko mukana wekubvisa chimwe chikamu cheaxis inotakura zvisungo uye imwe simbi pachayo, inobvumira kushandiswa kwekutep tei panguva yekusanganiswa.
Ichi chishandiso chehunyanzvi chakakosha kubata mapombi achiri uye anoenderana panguva ye electrofusio (kubva63-160mm).iyo algner160 CHIEDZA chinogadzirwa chinenge chakazara mune yakakosha Aluminium alloy uye inoratidzira yepakati kubatana kune yakagadziriswa nzvimbo pa45 dhigirii uye 90 dhigirii, ina yekuzvimiririra inosungirira iyo isingade maadapta, uye pakukumbira imwe ekisero yekuwedzera yakazara ine mabhanhire maviri ewelding. the tees.Iyo yakakosha kukurumidza kuburitsa zvisimbi inopa kukurumidza kudhirowa kwepombi kana yave welded.
Ichi chishandiso chehunyanzvi chinhu chakakosha kubata mapaipi achiri uye anoenderana panguva ye electrofusio (kubva63-200mm).
Iyo algner63-200 yakagadzirwa zvachose nesimbi, inoratidzira yepakati inogadziriswa yakabatana uye pombi yekumisikidza zvisungo zvakagadziriswa pane anex.Iyo adjustalbe jiont inogona kuiswa pane 4 nzvimbo dzakasiyana dzekushanda kuti dzibvumire welding pamakona ekutanga senge 30 °, 60 ° 90 °, mumutsara uye T welding.
Matemo ane mabhandi akaita V-akagadzikwa paari, ane mabhandi ekusunga pombi.Iyo sisitimu, pamwe nekugadzirisa pombi kune clamp, inoshanda zvakare sechinhu chinoisa pakati.Imwe neimwe axis ine 2 madhairekitori paanogona kutsvedza mabhanhire.
Pratrical side zvibato zvinogonesa kubata nyore panguva yekufamba uye kumira, zvese panguva yewelding maitiro, uye kugadzirira.
Iyo algner inowanikwa mune maviri masisitimu: 2 anxes uye 3 anex.
PS180 PS400 Scraper/Plastiki Gasi Pipe Yemvura pombi...
TURBO 20mm-63mm Plastic Pipe Scraper/Pe Mvura ...
Plastic Pipe Zvishandiso Kudziisa Plate yePlastiki Pi...
RTC160 RTC315 PE Gasi Mvura Yemvura Pipe Scraper Plastic...
Squeezer 63-200 Zvishandiso Zvekumisa Gasi Kana Mvura...
HDPE Pipe Yemukati Yekunze Debeader uye pip...